Olona velise lweZithuthi eziKhawulezayo oluKhawulezayo | Zhenhui
Sigxila kwizibane zomqondiso ongxamisekileyo,Ukukhanya okungxamisekileyo, Izibane ezingxamisekileyo ngenqanaba le-IP 30 kunye nePlassionproofProof, kwakhona izibane ze-cerish kunye nomsebenzi we-radar wersor, izibane eziphantsi ngomsebenzi ongxamisekileyo.
I-TUNP NOBUCHULE I-IP65 ukukhanya kwe-IP65 i-ZF-007-12 ZF-007-16
I-Zhenhui intle kakhulu i-tunnel ye-tunnel kunye negalari i-IP65 i-IP65 i-IP65 ye-IP65, sineziko lethu lovavanyo kumzi-mveliso ukuze kuqinisekiswe iimfuno zabathengi abazanelisa abathengi.
I-ZFE ihenda i-ZF-800s engxamisekileyo yokuphuma ngexabiso elihle elinexabiso elihle elenziwe nguGungdong Zhenhui
Zhenhui veledale ZF-800s Togoodprice-Zhenhui, Singayila ezinye iimveliso ezintsha ngokweenkonzo zeSebe loPhuculo lweMveliso
Abavelisi bexesha likaxakeka
I-Zhenhui Generagen Enction Avers Elt Amedlers, sele sigqibile iiprojekthi ezingaphezu kwe-1000 kwimarike yase-china, njengeHongkong-Zhuhai-Macai-Macao Bridge, i-cust cust stadium eBeacing.
Ukukhanya okungxamisekileyo kokuphuma kwe-Sl-516 I-Tendale ephezulu
I-Zhenhui Inqanaba eliphezulu lokuThengisa uphawu oluNgxamisekileyo lukhangeleka Sl-516 Outleale-Gungdong Zhelong Zomshite Umlilo Womliki Co., I-LTD., sineSebe eliMgangathweni kunye nabasebenzi ukuqinisekisa umgangatho wakho wemveliso.
Uncedo lwamandla olungxamisekileyo ze-ZF-w9-123
Zhengei Best Zf-W9-13 Ixabiso lefektri-Zhenhui, sinendawo yokusebenzela kunye neofisi malunga neemitha ezingama-50000 kwaye zibambe iimfuno zakho zexabiso eliphezulu.
Ipakethi yamandla engxamisekileyo- zf-w9-122 ibonelelwe nguGungdong Zhenhui umzi-mveliso
Zhenhui iyona ndlela ilungileyo yePakethi yePakethi yePakethi - ZF-W9-122 ibonelelwe nguGungdong Zhenhui, malunga ne-100 yabasebenzi, banakho ukwanelisa ii-odolo zakho zokuthenga.
I-Tunnel kunye negalari ukukhanya ip65 ukukhanya kwe-IPF-006-16 ZF-006-12
I-Zhenhui intle kakhulu i-tunnel ye-tennel kunye negalari i-IP65 i-IP65 ye-IP65 ye-IP65 ye-STF-007, sineSebe eliMgangathweni kunye nabasebenzi ukuqinisekisa umgangatho wakho wemveliso.